Creative Writing » ကျွန်မ၏သား နှင့် ဂဏန်းများ	35
ကိုပေါက်(မန္တလေး) says: ကလေးက အတော်ဥာဏ်ထက်တယ်ပြောရမယ်
၉လီမှာ အရှေ့ကိုတစ်တိုးပြီး အနောက်ကို တစ်လျော့လိုက်တာ အခုချိန်ထိ တစ်ခါမှ မစဉ်းစားမိ
hmee says: ဟုတ်​တယ်​ ​လေး​ပေါက်​ တခါတ​လေ ကိုယ်​အမှုမဲ့ အမှတ်​မဲ့ ​လေး​တွေကို သူက ​ထောက်​ပြရင်​ အံ့သြမိတယ်​။ စာဖတ်​လည်း ဝါသနာပါတယ်​။ စာဖတ်​ရင်​ဖတ်​ မဖတ်​ရင်း ​ရေး​နေတာပဲ။
မြစပဲရိုး says: မှီ ရေ
hmee says: သား​က သင်္ချာကို အ​တော်​​လေးကို အားသန်​တယ်​။ ​နောက်​ သူ​လေ သိပ်​​တွေးတယ်​။ စာလည်းဖတ်​တယ်​။ အင်္ဂလိပ်​စာ စာလုံး​လေး​တွေလည်း ၁တန်းနဲ့မလိုက်​ ​ဝေါဟာရ ကြွယ်​တယ်​။ သူ့ အဖွားနဲ့ စာလုံးဆက်​တိုင်းကစားရင်​ သူက စာလုံး အဆန်း​တွေ ဆက်​တတ်​တယ်​။ အဖွားက မကြားဘူးဖူးဆို အဘိဓာန်​မှာ ရှာပြ​ပေးတယ်​။ အဓိက က သူအားရင်​ စာအုပ်​​လေး​တွေ ဖတ်​​နေတယ်​။ ရုပ်​ရှင်​လာလို့ ဇာတ်​လမ်းနာမည်​ မသိရင်​ အ​ကြွေးမထားပဲ အဘိဓာန်​လှန်​ကြည့်​တတ်​တဲ့ ဥာဉ်​​လေး အ​တော်​​ကောင်းတယ်​။ ကျွန်​မနဲ့ စာလုံးဆက်​ ကစားရင်​ သူက ​မေ​မေ ​နောက်​တခါ စာလုံး သုံးလုံးတွဲ​လေး​တွေ ​တွေ့ရင်​​ရေးမှတ်​​ပေးပါတဲ့ ဘာလို့လဲ သားရဲ့ ဆို​တော့ ၃လုံးတွဲ​လေး​တွေက အလိုအပ်​ဆုံးတဲ့ အရီး​ရေ။ အဲ့လို စပ်​စပ်​စုစု ကို သူသိတာ။ ၁တန်းက​လေးက အဘိဓာန်​ကြည့်​တတ်​။ စာလုံးဆက်​ ကစားတတ်​လို့ အိမ်​ကို အလည်​လာလို့ ​တွေ့တဲ့ သူတိုင်း အံ့သြတယ်​။ သူ့ဝါသနာနဲ့သူပါပဲ။ သမီး​လေးက​တော့ သားနဲ့ မတူဘူး။ သူက စာမှာ သိပ်​အားမသန်​ဘူး နှစ်​​ယောက်​သား ပုံစံ သိပ်​ကွာတယ်​။
အ​တွေး​လေး​တွေရတိုင်း စာတို​လေး​တွေ​ကောက်​​ရေးထား​ပေမဲ့ ပြီးဆုံး​​အောင်​ တခါမှ ဆက်​မ​ရေးနိုင်​တဲ့ စာကိုယ်​ဝန်​​တွေ အများကြီး အရီး​ရေ။ ဝီရိယ နည်းတယ်​ ဆိုရမှာ။ ဒီပို့စ်​​လေးက​တော့ အာရုံထဲ​ရောက်​တုံး တထိုင်​တည်း​ရေး တထိုင်​တည်းရိုက်​ပြီးတင်​လို့ အထ​မြောက်​သွားတာ။ ​ Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 12396
ဇီဇီခင်ဇော် says: ဒီ အရွယ်မှာ ဒီလိုစူးစမ်းနိုင်ပြီး တွေးနိုင်တာ အတော်တော်တယ် ခေါ်ရမယ်။
hmee says: ဇီ​ရေ အ​တော်​ကို စူးစမ်းပြီး​တွေးတာ။ သူ့ ဘာသာသူ ​တွေးပြီး​မေးတာ​တွေကို တခါတ​လေ အမ မ​ဖြေနိုင်​ဘူး။ ကိုယ့်​ကကိုယ်​ ညံ​နေတာ​နေမှာ။ Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 2204
koyinmaung says: ၉နဲ့မြောက်လို့ရတဲ့အဖြေ မှန်သမျှပြန်ပေါင်းရင်၉ဘဲရတယ်…၉X၁၅=၁၃၅…၁+၃+၅=၉…..၉နဲ့သက်ဆိုင်တဲ့ဂဏန်းတွေလဲဒီအတိုင်းဘဲ ပြန်ပေါင်းရင်နောက်ဆုံး၉ဘဲရတယ် ၉x၁၂=၁၀၈….၂၅၆၀x၁၀၈=၂၉၁၀၆၀…၂+၉+၁+၀+၆+၀=၁၈…၁နဲ့၈နဲ့ပြန်ပေါင်း၉ဘဲရတယ် ၉ဂဏန်းရဲ့ထူးခြားတဲ့ဂုဏ်သတ္တိ……
koyinmaung says: မြန်မာပြည်မှာ ကလေးတွေအလီသင်ရင်မလိုအပ်ဘဲအများကြီးသင်ကြတယ် အလီကို12အထိဆိုခိုင်းတယ် ကျနော်တို့ငယ်ငယ်တုန်းက24အလီထိဆိုကြရသေးတယ်..
hmee says: သူတို့ ​ကျောင်းက​ပေးတဲ့ ဗလာစာအုပ်​မှာ​တော့ အလီကို ကိုရင်​​မောင်​ အခု​ပြောသလို ပုံ နှိပ်​ထားတယ်​။ ကိုရင်​​မောင်​ ​ပြောပြတဲ့ ကိုးဂဏန်းရဲ့ ဂုဏ်​သတိကို သားကို​ပြောပြလိုက်​မယ်​။ သူ သိရင်​ ချက်​ချင်းကို ချတွက်​မှာ​တော့ အ​သေအချာပဲ။ Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 2394
aye.kk says: ဥာဏ်ပြေးတဲ့သားလေးပါပဲ။
hmee says: ​ကျေးဇူးပါ အမ​ရေ။
၀င့်ပြုံးမြင့် says: .မမှီ သားလေး တော်လိုက်တာ။ အမကတော့ ခုထိ သားအတွက် စိတ်မောရတုန်း။
hmee says: အဆင်​​ပြေသွားမှာပါ မပြုံး​ရေ။ ​
ဦးကျောက်ခဲ says: မမှီသားကတော်တယ်ဗျ…
hmee says: ဟုတ်​တယ်​ ဦး​ကျောက်​​ရေ ကျွန်​မက​တော့ သူ ဝါသနာပါတာကို ​မြေ​တောင်​​မြှောက်​​ပေးမယ်​။ ကိုယ်​ လိုချင်​တာကို ပုံ မသွင်းဘူးလို့ ​တွေးထားပါတယ်​။
ဦးကြောင်ကြီး says: ချဲဒိုင်ဖြစ်အောင် မြေတောင် မြှောက်ပေးပါလေ…
hmee says: ဦး​ကြောင်​ ​ရေ သူသာ ဆန ရှိပါ​စေ မိဘ တာဝန်​​ကျေ​ပေးရမှာ​ပေါ့။ Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 8413
Ma Ma says: တော်လိုက်တာ။
ကြီးလာရင် သူစိတ်ဝင်စားတဲ့လိုင်းသာ လိုက်ခွင့်ရရင် ထူးထူးချွန်ချွန်ကို ဖြစ်အုံးမှာ။ Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 1163
hmee says: သူ့ ဘကြီးလို အင်​ဂျင်​နီယာ လုပ်​မလားဆို​တော့။ သားက ​လေယာဉ်​​မောင်းတဲ့ ပိုင်း​လော့ လုပ်​မယ်​ဆိုပဲ။ ဟုတ်​မဟုတ်​​တော့မသိဘူး။ Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 4718
padonmar says: လေထဲက နိုနို ကို မြင်ဖူးလို့ များလား။
manawphyulay says: အင်း ဒါဆို မမှီရေ… မနောလည်း သမီးလေးကို သင်ဖို့ ခုကတည်းက ပြန်လေ့လာရတော့မယ်ထင်တယ်နော်…
hmee says: ဟုတ်​တယ်​ မ​နော​ရေ ပြန်​​လေ့လာထားရမှာ။ တခါတ​လေ သူတို့ ​မေးတာ ကိုယ်​ မသိရင်​​တောင်​ အလိုက်​သင့်​​လေး​နေပြီး ကွယ်​ရာကြမှ သူ​မေးတာ ပြန်​​ဖြေနိုင်​​အောင်​ ပြန်​ပြီး ကမန်းကတန်း ​လေ့လာရတယ်​။ သားက​ပြောတတ်​တယ်​ ​မေ​မေ ​မေ​မေဆိုတာ အကုန်​သိပြီး ဘာလို့ အကုန်​လုပ်​တတ်​တာလဲတဲ့။ အမှန်​​တော့ အ​မေက သူ မသိခင်​ အမြန်​ ပြန်​ပြီး အ​ဖြေရှာရတာ သူမှမသိ​တော့ အ​မေကို အထင်​​တွေကြီး​နေတာ။ Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 2898
ဦးကျောက်ခဲ says: အယ်… တိုးတက်သွားပြီလား…
သမီးလေးဆိုတော့ … အဟိ အဟိ Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 12168
Alinsett @ Maung Thura says: ဂဏန်းတွေထဲ.. ၉ ကို အကြိုက်ဆုံး..
အဲ… အန်တီမှီ့ သားတော်မောင်လောက်တော့ သင်္ချာပိုင်းမှာ မထူးချွန်လောက်…. ဒါမယ့်..အန်တီမှီ ညီမတော်လောက်တော့ တော်မယ်ထင့်…
hmee says: အဲ့ ညီမ က ​တော်​တယ်​ ဆက်​ဆက်​​ရေ။ ညီအမ ၅​ယောက်​မှာ အထက်​ဆုံးပဲ။ ခု ​နေမ​ကောင်းဘူး အလုပမ်​ထွက်​ပြီး အ​မေတို့ဆီ ပြန်​ပြီးနား​နေတယ်​။ Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 4718
padonmar says: ကားနံပါတ်+ဖုန်းနံပါတ် +သမိုင်းထဲက ခုနှစ်တွေ မမှတ်မိ။အကြောင်းအရာဆို မှတ်မိတယ်။
hmee says: ဟုတ်​ အမဒုံ။ ပုံမသွင်းဘူး။ သူ ဖြစ်​ချင်​တာကိုပဲ ပံ့ပိုး​ပေးမယ်​လို့ စဉ်းစားထားပါတယ်​။
Mike says: .လက်ဖျားတောင်ခါတယ်မမှီရေ…တော်လိုက်တာ
hmee says: ဦးကြီးမိုက်​ သမီး​လေးလို သားက်ို ​တော်​​စေချင်​လိုက်​တာ။ ပြီးမှသာ သားဝါသနာပါရာ လု​ခွင့်​​ပေးမှာပါ။
HMM says: တော်တော်တွေးတတ်တဲ့ ကလေးလေးပဲ…
hmee says: သားက ​တွေးတာ​တော့ ​တော်​​တော်​ကို ​တွေးတာ။ Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 1684
အောင် မိုးသူ says: အားလုံးပေါင်းကိုးတော့ သိတယ်။ အလီကိုချပြသွားတာလေး မှတ်သားထားလိုက်ပါတယ်။
kai says: ကလေးကြီးလာမယ့်…. ခေတ်လောက်ဆို… ၀ါသနာပါတာကနေ.. အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းဖြစ်လောက်အောင် ၀င်ငွေရတဲ့ခေတ်ဖြစ်နေလောက်မှာပါ…။
မွသဲ ( 17082011 ) says: အရင်ဆုံးနှမျောလိုက်တာလို့ပြောရမယ်ထင်တယ်။ အမေရိကားမှာဆိုဒီကလေးမျိုးကို ကျောင်းကအပြန်ပြန်လေ့လာပြီး တကယ့်ထူးချွန်ကလေးဆိုရင် သီးသန့်ဆရာနဲ့ ပညာရှင်ဖြစ်အောင်လုပ်ပေးတော့မှာ။ ဒီနိုင်ငံမှာဖြစ်နေလေတော့ နှမျောတသရွတ်ရုံမှတပါး
​ဒေါ် လေး says: တော်လိုက်တာ ကလေးက ဒီအသက်အရွယ်နဲ့